Qulqulatooyinka diimeed ee Itoobiya ka dhacay maxay salka ku hayaan? - BBC News Somali
Maalinti shalay ahayd magaalada Mootaa ee deegaanka Amxaarada oo ku taalla waqooyiga dalka Itoobiya waxaa lagu gubay masaajiddo dhowr ah waxaana la boobay hantida ay lahaayeen dadka muslimiinta ee looga tirada badan yahay waqooyiga dalkaasi.
BBC oo isku dayday iney la xiriirto duqa magaalada Mootaa uu dhibka ka dhacay iyo hoggaanka nabadgalyada ee deegaankaasi uma suuragelin. oo waxay u shegeen iney shirar xaaladda lagu dajinayo ku mashquulsan yihiin.
Nin reer Canada ah oo lagu eedeeyay in uu dilay lix ruux oo Muslimiin ah oo ku cibaadaysanayay masaajid ku yaalla Quebec sannadkii 2017kii ayaa qirtay dhamaan dacwadihii loo haystay,